Black Rhinoceros - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Black Rhinoceros [Diceros bicornis sp - ezininzi iintlobo zaseAfrika]
Iibhokhwe zinzima ukuya ku-1 200 kg kunye neenkomo malunga no-800 kg. Ngaloo ndlela le ntlobo incinci kune-white rhino. Iyakwazi ukwahlukana ngakumbi kwi-white (okanye I-square-lipped) irhino kwinyheke ephezulu. Ngaphandle kwe-white rhino, intloko encinci ibambelele phezulu. Iindlebe zixilongo-njengayo kwaye zininzi umhlaba apho ujikeleza khona, ngokuyinxalenye ubeka umbala wefele.
Ukuba ngumkhangeli, yondla kwimithi, amahlathi kunye nemifuno. Kuphela xa phantsi koxinzelelo lwezondlo ukuyo kutya ingca. Amasebe kunye namahlamvu athathwe ngomlomo ophezulu okhuniweyo, atyathelwe emlonyeni, aze agqitywe ngamazinyo asemva, kunye ne-masticated. Olu 'tyala' lweemithi lwaluvumela iindawo zezilwanyana ukuba ziqhube iiphononongo ezinzulu malunga neepatheni zokutya kunye nokukhetha.
Ukubambisana akusiyo yonyaka. Ngethuba lokuziphatha, inkunzi yamadoda ibe neempondo. Ukubambisana kunokuba ngumcimbi onobundlobongela noqheliso. Ienkomo zizalela okokuqala ngexesha leminyaka eyi-5 okanye eyi-6.
Ukubaleka, kunokufikelela kwisantya ukuya ku-55 km / h. Ngamaxesha emini irhino I-middens atyhidiwe yi-black rhino kunye nomthunzi wayo. Ubungakanani bemimandla yenkomo kakhulu kuxhomekeke kubukho bokutya nokubonelelwa kwamanzi. Iinkunzi zeenkomo ezincinci zingena kwimimandla yeenkomo eziphambili zingabulawa. Iibhokhwe zihlala zodwa, kwaye ziza kuchitha ixesha kunye nesetyhini kumjikelezo we-oestrus.
IRhino zase-Afrika zinqabile ukusuka ku-65 ngo-1970 ukuya ku-2 400 ngo-1995, xa kubalwa inani lokugqibela. Ubuninzi be-Black Rhino kubantu baseMzantsi Afrika, eNamibia, eKenya naseZimbabwe. Olu hlobo lusetyenziswa ngokusongela. Imizamo yokuzinyanzelisa yolondolozo, yinto yokuba i-zizalwana ezine zivunyiwe kwi-qela ye-Black Rhino. KaDb. I-bicornis, iRhino ezincinci zisungulwa kwakhona kumzantsi-ntshona eMzantsi Afrika, weDbb. I-michaeli, isibonelelo esiphezulu-sabantu sisekwa kwi-Addo Elephant National Park, eMzantsi Afrika. I-D.b encinci ibonakala kwimimandla esenyakatho nempuma
Iingqungquthela zaseAfrika zikwinye inqanaba lokunqumla i-rhino uphondo lwentengiso- kwaye ixabiso leRhinino Horn liba luxabiseke ngakumbi kune-cocaine. Isizathu sale nto yintsholongwane ephosakeleyo eMpuma ukuba uphondo luyi-aphrodisiac enamandla kunye ne-phuhlisayo. Urhweba aluyi kuyeka de ukuba izimo zengqondo zitshintshwe eMpuma, nangona iimbono zoluntu jikelele nolondolozo lwendalo.